Vaovao - The Tumbler tsara indrindra
Ilay Tumbler tsara indrindra
Aorian'ny famelana taolam-paty miisa 16 feno Slurpee eo amin'ny seza aloha misy sedan mafana dia resy lahatra izahay fa ny Hydro Flask 22-ounce tumbler no tsara indrindra amin'ny ankamaroan'ny olona. Na dia nijaly tamin'ny hafanana 112 degre aza izahay, dia hitanay fa mahomby daholo ny sandan'ny insulateur eo amin'ny ankamaroan'ny mpikotroka (afaka mihazona ny fisotroanao na mafana na mangatsiaka mandritra ny ora vitsivitsy). Ny zava-bitan'ny Hydro Flask sy ny estetika nataony no mpandresy.
Ny mpamitaka ankafizinay indrindra dia ny 22-ounce an'ny Hydro Flask. Tsy toy ny tavoahangin-drano na thermos, ny tumbler dia tsy natao hanipazana kitapo. Izy io dia mitazona ny hafanana sy ny hatsiaka ihany raha mbola mila miala amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa ianao ary mamela anao hisoka mora foana mandritra ny fivezivezena: io no sambo mpandeha farany indrindra.
Nisy mpikapa dimy nipoitra nandritra ny fitsapana notazoninay Slurpee, ary ny Hydro Flask dia tao anatin'io dimy voalohany io. Ary nitana ny laharana faharoa tamin'ny fitsapana fitehirizana hafanana anay, natolotray mari-pahaizana maripana tokana, noho izany dia hitazona mora foana ny kafe mandritra ny fiverenanao. Fa ny estetika no antony itiavan'ny olona an'io zavatra io. Niresaka tamina olona am-polony (na mihoatra) izahay nandritra ny sakafo hariva nanodidina ny afon-dasy, ary nifanaraka izy ireo fa mora kokoa ny mitazona sy manome fahafinaretana kokoa noho ny iray amin'ireo maodely 16 hafa nojerentsika ny Hydro Flask noho ireo mpivavaka mafana fo. Ny Hydro Flask dia manana endrika manify indrindra sy mitsiriritra indrindra amin'ireo tumblers rehetra nojerentsika ary tonga amina palitao valo mahafinaritra. Aleonay ireo noho ilay tumbler vy tsy misy fangarony, satria tsy mahazo aina ireo mikasika azy ireo raha avela amin'ny masoandro.
Hydro Flask dia manolotra sarony miaraka amina mololo atambatra ho an'ny kinova tumbler 32-ounce sy 22-ounce. Izahay dia nanandrana azy tamin'ny kinova lehibe kokoa, ary mahatalanjona: azo antoka, mora esorina sy diovina, ary nasiana vavam-bolo silikonika malefaka hisorohana ny fikororohana molotra malefaka.
Farany, nandefa mailaka tamin'ilay orinasa izahay mba hanontany raha azo antoka ny amin'ny fanasana vilia. Ny valiny: "Na dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fiparitahan'ny koveta aza ny fanasana vilia, dia mety hanala ny akanjo vita amin'ny vovoka ny mari-pana ambony miaraka amin'ny deteritra sasany. Toy izany koa, ny fanosehana ny tavoara manontolo ao anaty rano mafana dia mety hanala ilay akanjo vita amin'ny vovoka.